बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको आईपीओ प्रि-अलोटमेण्ट बुधवार, शुक्रवार बाँडफाँट
असोज १९, काठमाडौं । बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा बुधवार प्रि - अलोटमेण्ट हुने भएको छ ।
विक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले बुधवार प्रि - अलोटमेण्ट गर्ने जानकारी दिएको हो । बिहीवार घटस्थापनाको सार्वजनिक विदा परेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिए शुक्रवार अन्तिम बाँडफाँट गर्ने जानकारी क्यापिटलले दिएको छ ।
सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको रू. ८ करोड बराबरको ८ लाख कित्ता आईपीओमध्ये २ प्रतिशत दरको १६ हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत दरको ४० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्नुअघि आयोजना प्रभावित नुवाकोट जिल्लाका स्थानियका लागि गत साउन ३२ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म आईपीओ विक्री गरी भदौ ३१ गते बाँडफाँट गरेको थियो ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १२ दशमलव ५६ ऋणात्मक र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ७१ दशमलव ४९ रहेको छ । उक्त अवधिसम्म कम्पनीले रू. ३ करोड ६८ लाख ३२ हजार खुद नोक्सानी व्यहोरेको छ ।